Nagu saabsan | Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd.
Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo ku hawlan soo saarista, farsamaynta iyo iibinta waxsoo saarka. Waxaan soo bandhignay qalab casri ah oo caalami ah, kaas oo soo saari kara qeexitaanno kala duwan oo ah velcro-dependent (jillaab iyo loop), PSA (is-adhensive) saxannada saxarada iyo alaabada kale ee xoqan sida ku xusan shuruudaha macaamiisha. hagaajinta gawaarida iyo dib u habeynta, dhismaha maraakiibta, soo saarista qalabka guryaha, alaabada elektarooniga ah, dharka iyo warshadaha kale.
Sanadihii la soo dhaafay waaxdeena R&D waxay sameysay horumar isdaba-joog ah oo ku saabsan badeecadeena iyo qalabkeena la casriyeeyay, waxayna soo aruurisay khibrado badan oo qaali ah. Alaabteena waxaa ka helnay aqbalaad sare macaamiisha. Magacyadeenna "YS" 、 "XYS" 、 "YUQING" Si wanaagsan ugama helin kaliya suuqa gudaha, laakiin sidoo kale si wanaagsan ayaa looga soo dhoweeyey dalal kale iyo gobollo badan oo adduunka oo dhan ah.
Noqoshada xirfadle, hal abuur leh iyo ka mid ahaanshaha raadinta heer sare! Macaamiisha ku qanacsanaantoodu waa baacsigeena weligeed ah! Kooxdeena xirfadeed waxay u hogaansami doonaan ruuxa macaamiisha marka hore, mar walbana waxay diyaar u yihiin inay la yimaadaan xirfadle, adeeg tixgelin leh iyo taageero farsamo.
- —Taariikh Kooban— -
2008: La aasaasay
2011: Waxaa loo guuray warshad cusub
2014: oo la aasaasay Booqday Mashiinka Qalalan ee Bilaa Bilaashka ah
2016: bilow ganacsi caalami ah Maalgeli warshad cusub, soosaarida iyo soo saarista abrasives.
2018: Shahaadada CE-ga ee la dhaafay
2019: Badeecad Cusub oo La Sameeyay: Sander
- — Dhaqan Wadaag— -
Ahaanshaha Xirfadle, hal abuur leh iyo ku raad raadinta heer sare!
Ku qanacsanaanta macaamiisha ayaa ah baacsigeenna!
Kooxdayada xirfadleyda ah waxay u hoggaansami doonaan ruuxa macaamiisha marka hore waxayna marwalba diyaar u yihiin inay macaamiisha siiyaan macaamiisheenna, adeegga tixgelinta leh iyo taageerada farsamo.
- —R & D Awooda— -
XYS waxay soo bandhigaysaa qalab casri ah oo caalami ah waxayna dhistay koox cilmi baaris iyo horumarineed, waa dhakhaatiir, sayidyo iyo khubaro badan oo ajaanib sare ah oo ka shaqeeya warshadan.
- - Sharafta Wadaag— -
- —Shaqaale / Bandhig Warshad— -
- —Wadaagelaha Wada Shaqeynta— -
- — Dhacdooyinka / Bandhigyada— -